Tag: fitantanana lazan'ny mailaka | Martech Zone
Tag: fitantanana lazan'ny mailaka
Ny fandefasana mailaka amin'ny boaty dia mitohy ho dingana mahakivy ho an'ny orinasa ara-dalàna satria manohy manararaotra sy manimba ny indostria ny spam. Satria mora sy tsy lafo ny mandefa mailaka, ny spammer dia afaka mitsambikina fotsiny avy amin'ny serivisy mankany amin'ny serivisy, na koa script izay alefan'izy ireo avy hatrany amin'ny mpizara. Ireo mpanome tolotra Internet (ISP) dia noterena hanamarina ireo mpandefa, hanangana laza amin'ny fandefasana adiresy IP sy domains, ary koa ny fanamarinana isaky ny
Nanoratra momba ny 250ok izahay taloha ary manohy manatsara ny tolotra azo entina izy ireo. Ny ankamaroan'ny mpivarotra mailaka lehibe dia tsy mahafantatra akory fa afaka manana isan-jato tena azo avoaka izy ireo, saingy mety tafapetraka ao anaty sivana SPAM ny mailaka ataon'izy ireo. Ny Deliverability dia midika fotsiny hoe nisy hafatra nalefa… tsy hoe nahatonga ilay boaty. Na dia lafo aza ny vahaolana hafa eto amin'ity habaka ity, ny 250ok dia vahaolana mora vidy izay manome fahaiza-manao bebe kokoa - ary ny fanambarana anio